သင့် ဖုန်းကို အိပ်နေစဉ်မှာ အားမသွင်းသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း | Myanmar Mobile App
Home Knowledge သင့် ဖုန်းကို အိပ်နေစဉ်မှာ အားမသွင်းသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
မိုဘိုင်းဖုန်းများမှာ ပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်တဲ့ Lithium-Ion Battery များထည့်သွင်းထားပြီး သူတို့ဟာ သမားရိုးကျ ဘက်ထရီများထက် အားသွင်းရာမှာ ပိုမြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ ပျမ်းမျှ ဘက်ထရီ သက်တမ်းဟာ တစ်ရက်လောက်သာခံပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ညဘက်ရောက်ချိန်မှာ သင့်ဖုန်းဟာ အားကုန်နေမှာပါ။
ဒါ့ကြောင့်လည်း လူတွေဟာ ညဘက် အိပ်တဲ့ အခါမှာ ဖုန်းကို အားသွင်းတတ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဖုန်းတစ်လုံးကို ၁ နာရီ၊ ၂ နာရီလောက် အားသွင်းရင် အားအပြည့်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ညလုံး အားသွင်းဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒီိလို တစ်ညလုံး အားသွင်းထားရင် ပြဿနာ ရှိနိုင်သလား?
အပေါ်ယံပြောရရင် အဖြေက နိုးပါ။ သင့်ဖုန်းဟာ အားအပြည့်ဖြည့်ပြီးတာနဲ့ Charger ကနေ အားစုပ်ယူမှု မရှိတော့ပါဘူးလို့ Cadex Electronics ရဲ့ မန်နေဂျာ John Bradshaw က ပြောပါတယ်။ ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ Anker ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Edo Campos က “ ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းများဟာ စမတ်ကျလာပါတယ်။ သူတို့မှာ လိုတာထက်ပိုပြီး အားမသွင်းမိအောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ Chip များပါပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ Charger များမှာလည်း လိုတာထက် အားပိုလွှတ်ခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ Chip များ ပါပါတယ်။ “ လို့ ပြောပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ သတင်းက ဒီလိုပါ။ သင့် ဖုန်းဟာ ရာနှုန်းပြည့် အားသွင်းပြီးရင် Charger က အားသွင်းမှုကို ရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့်ထားတဲ့အတွက် အလုပ်များ လုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အားက လျော့ကျသွားပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ Charger က အားအပြည့် ထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ ဒီလို အားလျော့သွားလိုက်၊ အားပြန်ဖြည့်လိုက်ဖြစ်နေတာဟာ ဖုန်းရဲ့ အပူချိန်ကို မြင့်မားစေသလို ဘက်ထရီရဲ့ သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ရေရှည်မှာ ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဖုန်းကို တစ်ညလုံး အားသွင်းထားခြင်းဟာ သင့် ဖုန်းနဲ့ Charger တို့ကို အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘက်ထရီရဲ့ စွမ်းရည်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
ဖုန်းကို အားလုံးဝ ကုန်အောင် မသုံးပါနဲ့။ ဒီိလို ပြုလုပ်ခြင်းဟာလည်း ဘက်ထရီ စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ၃၅ နဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရောက်တဲ့ အချိန်ဟာ အားသွင်းဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါဟာ ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုလည်း မကျဆင်းစေပါဘူး။ အပူချိန် မြင့်မားခြင်းဟာ ဘက်ထရီ စွမ်းရည်ကို ကျဆင်းစေတဲ့အတွက် ဖုန်းကို အေးမြအောင်ထားပါ။ အားသွင်းမယ်ဆိုရင် Case ကို ချွတ်ထားပါ။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှိုန်း အားပြည့်တာနဲ့ Charger ကနေ ဖြုတ်ပါ။ တစ်ညလုံး အားသွင်းထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
မိုဘိုငျးဖုနျးမြားမှာ ပွနျလညျအားဖွညျ့နိုငျတဲ့ Lithium-Ion Battery မြားထညျ့သှငျးထားပွီး သူတို့ဟာ သမားရိုးကြ ဘကျထရီမြားထကျ အားသှငျးရာမှာ ပိုမွနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးရဲ့ ပမျြးမြှ ဘကျထရီ သကျတမျးဟာ တဈရကျလောကျသာခံပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ ညဘကျရောကျခြိနျမှာ သငျ့ဖုနျးဟာ အားကုနျနမှောပါ။
ဒါ့ကွောငျ့လညျး လူတှဟော ညဘကျ အိပျတဲ့ အခါမှာ ဖုနျးကို အားသှငျးတတျကွပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ဖုနျးတဈလုံးကို ၁ နာရီ၊ ၂ နာရီလောကျ အားသှငျးရငျ အားအပွညျ့ဖွညျ့နိုငျပါတယျ။ တဈညလုံး အားသှငျးဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒီလို တဈညလုံး အားသှငျးထားရငျ ပွဿနာ ရှိနိုငျသလား?
အပျေါယံပွောရရငျ အဖွကေ နိုးပါ။ သငျ့ဖုနျးဟာ အားအပွညျ့ဖွညျ့ပွီးတာနဲ့ Charger ကနေ အားစုပျယူမှု မရှိတော့ပါဘူးလို့ Cadex Electronics ရဲ့ မနျနဂြော John Bradshaw က ပွောပါတယျ။ ဘကျထရီ ထုတျလုပျသူ Anker ရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ Edo Campos က “ ခတျေပျေါ စမတျဖုနျးမြားဟာ စမတျကလြာပါတယျ။ သူတို့မှာ လိုတာထကျပိုပွီး အားမသှငျးမိအောငျ ကာကှယျပေးတဲ့ Chip မြားပါပါတယျ။ အရညျအသှေးမွငျ့တဲ့ Charger မြားမှာလညျး လိုတာထကျ အားပိုလှတျခွငျးကို တားဆီးပေးတဲ့ Chip မြား ပါပါတယျ။ “ လို့ ပွောပါတယျ။
မကောငျးတဲ့ သတငျးက ဒီလိုပါ။ သငျ့ ဖုနျးဟာ ရာနှုနျးပွညျ့ အားသှငျးပွီးရငျ Charger က အားသှငျးမှုကို ရပျနားလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖုနျးကို ပါဝါဖှငျ့ထားတဲ့အတှကျ အလုပျမြား လုပျနပေါတယျ။ အဲဒီအတှကျ အားက လြော့ကသြှားပါတယျ။ အဲဒီ အခြိနျမှာ Charger က အားအပွညျ့ ထပျဖွညျ့ပါတယျ။ ဒီလို အားလြော့သှားလိုကျ၊ အားပွနျဖွညျ့လိုကျဖွဈနတောဟာ ဖုနျးရဲ့ အပူခြိနျကို မွငျ့မားစသေလို ဘကျထရီရဲ့ သိုလှောငျနိုငျစှမျးကိုလညျး ရရှေညျမှာ ကဆြငျးစပေါတယျ။ ဖုနျးကို တဈညလုံး အားသှငျးထားခွငျးဟာ သငျ့ ဖုနျးနဲ့ Charger တို့ကို အခြိနျပွညျ့ အလုပျလုပျစပေါတယျ။ အဲဒီအတှကျ ဘကျထရီရဲ့ စှမျးရညျကို ကဆြငျးစပေါတယျ။
ဖုနျးကို အားလုံးဝ ကုနျအောငျ မသုံးပါနဲ့။ ဒီလို ပွုလုပျခွငျးဟာလညျး ဘကျထရီ စှမျးရညျကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ ၃၅ နဲ့ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျရောကျတဲ့ အခြိနျဟာ အားသှငျးဖို့ အကောငျးဆုံးပါ။ ဒါဟာ ဘကျထရီစှမျးရညျကိုလညျး မကဆြငျးစပေါဘူး။ အပူခြိနျ မွငျ့မားခွငျးဟာ ဘကျထရီ စှမျးရညျကို ကဆြငျးစတေဲ့အတှကျ ဖုနျးကို အေးမွအောငျထားပါ။ အားသှငျးမယျဆိုရငျ Case ကို ခြှတျထားပါ။ ၁၀၀ ရာခိုငျနှိုနျး အားပွညျ့တာနဲ့ Charger ကနေ ဖွုတျပါ။ တဈညလုံး အားသှငျးထားခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ။
Previous articleကြိုက်သလောက်မှောင်ပါစေ ပုံရိပ်ကောင်းကောင်းတွေပေးစွမ်းနိုင်မယ့် Sony ရဲ့ Xperia XZ2 Premium
Next articleApple ဟာ iPhone X ရောင်းချမှုကို ရပ်နားတော့မယ်လို့ သတင်းထွက်